မြန်မာနိုင်ငံ... - myanmar.paylab.com
လစာအမျိုးအစား: ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်မှု
Salaries range for person working in မြန်မာနိုင်ငံ in ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်မှု is typically from 205,657 MMK (minimum salary) to 612,728 MMK (highest average, actual maximum salary is higher).
This is the total monthly salary including bonuses. Salaries vary drastically among different job positons. If you are interested in the salary ofaparticular job, see below for salaries for specific position.
ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစောင့်ရှောက်မှု အမျိုးစားအတွက် အသားတင်လစာ။
10% သက်သာတယ်။ 206K MMK
10% ပိုဝင်ငွေ 613K MMK
လစာများသည် ရာထူးအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဖော်ပြထားသည့်ပမာဏမှာ ရည်ညွန်းများဖြစ်သည်။
For companies - gain confidence in deciding on salaries
Set the salaries of your employees fairly. A detailed salary report will help you with this. You will always have relevant salary data at hand.
Try the Salary Tool for free
သင့် ရာထူးကိုနှိပ်ပြီး စစ်တမ်းတွင်သင့်လစာကိုလဲစစ်ပါ.
171,939 - 429,459 MMK
162,335 - 476,780 MMK
168,612 - 862,303 MMK
164,778 - 442,046 MMK
187,950 - 513,901 MMK
200,646 - 530,099 MMK
211,664 - 734,343 MMK
154,181 - 728,467 MMK
313,647 - 742,510 MMK
202,963 - 563,641 MMK
282,571 - 705,639 MMK
211,750 - 578,439 MMK
256,940 - 641,747 MMK
196,384 - 531,657 MMK
130,505 - 385,760 MMK
187,472 - 366,396 MMK
178,005 - 1,169,481 MMK
182,255 - 326,475 MMK
261,980 - 645,861 MMK
336,953 - 751,151 MMK
224,579 - 460,541 MMK
189,429 - 461,620 MMK
246,598 - 635,904 MMK
421,000 - 1,026,656 MMK
250,469 - 1,326,330 MMK
240,297 - 648,005 MMK
125,651 - 376,852 MMK
375,400 - 863,616 MMK
267,860 - 595,546 MMK
214,630 - 496,328 MMK
236,252 - 556,109 MMK
616,624 - 1,204,603 MMK
250,432 - 1,170,927 MMK
154,097 - 525,987 MMK
184,956 - 523,332 MMK
216,400 - 579,022 MMK
160,879 - 447,479 MMK
150,391 - 462,084 MMK
196,915 - 541,402 MMK
193,565 - 504,822 MMK
189,397 - 579,304 MMK
229,097 - 740,456 MMK
183,571 - 529,756 MMK
373,981 - 928,881 MMK
212,943 - 524,186 MMK
217,589 - 544,681 MMK
226,040 - 598,881 MMK
191,885 - 394,872 MMK
427,177 - 962,093 MMK
174,007 - 499,284 MMK
170,612 - 492,498 MMK
စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး၊ ...
မားကတ်တင်းသမားတွေအနေနဲ့ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနဲ့ ဈေးကွက်စိန်ခေါ်မှုတွေကြားမှာ ဈ...
နိုင်ငံတကာ Paylab ကွဲပြားမှုအကြောင်းလေ့လာချက် တွေက ဥရောပမှာရှိတဲ့ ၀န်ထမ်း ဆယ်ယော...
myanmar.paylab.com ကိုအသုံးပြုရန်ထောက်ပံ့ထားသော browser ကို download လုပ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် myanmar.paylab.com ကိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်များနှင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် myanmar.paylab.com ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်သင်၏ဘရောင်ဇာသည်ထိုနည်းပညာများကိုမထောက်ပံ့ပါ။
©2022 Profesia, spol. s r.o. All rights reserved!